Ngaba kokona kutya kubi kwabantwana | IBezzia
Kukuphi ukutya okona kubi ebantwaneni
UMaria Jose Roldan | 01/10/2021 22:57 | Ingcebiso koomama
Abazali kufuneka banike indima ebalulekileyo kwisondlo sabantwana babo. Kulungile ukuba kuba bebancinci, abantwana balandela imikhwa efanelekileyo xa kufikwa kumba wokutya. Kufuneka bazi ngalo lonke ixesha ukuba yintoni esempilweni emzimbeni wabo kwaye yintoni eyingozi.
Kwinqaku elilandelayo siza kuthetha ngako oko kutya kuyingozi ngokupheleleyo kwaye kuyingozi kwimpilo yomncinci.
3 Cocoa umgubo
4 Amakhekhe eshishini
5 Ukutya okucutshungulwayo
Ijusi kukutya okune-carbohydrate eneswekile eninzi njengeglucose kunye nefructose. Ukusetyenziswa gwenxa kweejusi kunokubangela abantwana ukuba babe neswekile kunye neengxaki zobunzima kwixesha eliphakathi. Njengolunye uhlobo lweejusi, olona khetho lufanelekileyo lubisi lweenkomo okanye amanzi.
Uninzi lweesiriyeli ezifumaneka kwivenkile enkulu, banexabiso elisezantsi lesondlo kwaye batyebile kwiswekile. Ngelishwa kwaye ngaphandle kwento ebonwayo, yimveliso yenkwenkwezi kwisidlo sakusasa sabantwana. Kwimeko yokubonelela ngeesiriyeli zabancinci, olona khetho lufanelekileyo yi-oats. Kukutya okunegalelo lamandla elikhulu kwaye kubonelela ngefayibha esemgangathweni emzimbeni.
Olunye uhlobo lokutya oluthandwayo noluyingozi kakhulu kubantwana ngumgubo wecocoa. Umntwana ongadli sakusasa ngeglasi yobisi kunye necocoa enyibilikayo unqabile. Njengakwiimveliso esele zibonwe apha ngasentla, i-cocoa enyibilikayo ayinikezeli ngezakha mzimba kwaye inexabiso elikhulu leswekile. Olona khetho lulungileyo kukuthatha i-cocoa echazwe ngokupheleleyo kwaye i-100% ihlambuluke.
Ukutya okumbalwa kunobungozi kwaye kubi emntwaneni njengamaqebengwana emizi-mveliso. Ezi ziimveliso ezinesixa esikhulu samafutha e-trans kunye neswekile elula. Ukusetyenziswa kakhulu kwamaqebengwana, kungakhokelela kwiingxaki ezinzulu zempilo kumncinci kwixesha eliphakathi nelide. Eyona nto ifanelekileyo kukukhetha iziqhamo okanye umgubo opheleleyo kuba besempilweni kakhulu.
Oku kutya kunezongezo ezininzi kwaye zityebile kwi-trans fat kunye netyuwa. Kungenxa yoko le nto iimveliso ezinjalo kufuneka zisuswe ekutyeni komntwana mihla le kwaye zihlala zikhetha izitya ezenziwe ekhaya ezenziwe ngezinto zendalo ngaphandle kwezongezo ezinje ngemifuno, iintlanzi okanye amaqanda.
Ngamafutshane, oku kukutya ekungafanelekanga ukuba kubekhona ekutyeni kweentsana okanye kwabantwana. Eyona nto intle nakweyiphi na imeko kukukhetha isidlo esenziwe ekhaya esenziwe kukutya okutsha okufana nemifuno okanye imifuno. Ngamaxesha onke abazali kufuneka balazi igalelo lesondlo kubantwana babo.
Ukutya okufanelekileyo nokuchanekileyo kuxhomekeke ekubeni umntwana angakhula na ngendlela esempilweni kwaye ngaphandle kweengxaki zempilo. Kwimfundo, imikhwa elungileyo yokutya kufuneka idlale indima ebonakalayo, ivumela umntwana ukuba atye ngokufanelekileyo. Ukuziqhelanisa nokutya ngokuchanekileyo njengabantwana kubenza bazi kwiminyaka edlulileyo ukuba yintoni eyingozi kwimpilo yabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Ingcebiso koomama » Kukuphi ukutya okona kubi ebantwaneni
Imiyalelo emi-3 yeNkunkuma yeZero
Iitafile zokunxiba itafile yakho yasekwindla